Megaquarium: mutambo wevhidhiyo nezve wepaki theme theme | Linux Vakapindwa muropa
Kubva kune vanogadzira mutambo wevhidhiyo wakabudirira Big Pharma, Kaviri Akatenderedzwa, ikozvino rimwe zita rasvikawo iro rinoratidzika kunge riri kuvimbisa. Ini ndinotaura nezvazvo Megaquarium mutambo wevhidhiyo unonakidza kwazvo kana uchida madhimoni ekutungamira. Mune ino kesi, iwe uri pamusoro wepaki hombe yemusoro. Kunyanya, iwe unofanirwa kubata akwariyamu neakawanda ezvisikwa izvo vanhu vachashanyira kuti vaone. Kunyangwe hausi mutambo wevhidhiyo wakasikwa nguva pfupi yadarika, uye iwe unonyatso ziva kuti inowanikwa yeLinux, asi kune makuru makuru nhau kune vatambi.
Megaquarium ndiro zita remusoro wenyaya "Tycoon" (iine chinhu ichocho chakajairika pane ayo mavara uye kutamba kwainoitwa nemitambo iyi) inokodzera vanoda hupenyu hwemumvura, uye ikozvino ine inonakidza yekuvandudza. Pamwe iyo yekuvandudza kana mupiro yakawanda, asi yakwanisa kuvandudza yakakosha poindi. Uye ndeyekuti inowedzera kutsigira modding, saka kana iwe ukagadzirisa izvozvi, unogona kushandisa mods yemutambo wevhidhiyo uyu. Chinhu chinochazvipa nemano matsva uye zvakawanda zvichaitika mune ramangwana.
Iwe unotoziva kuti Megaquarium inowanikwa pane iyo Valve online chitoro, Steam. Iwe unayo zvakare muGOG, asi mune ino kesi haugone kurodha pasi mods zvakananga kubva kuchitoro uye wotanga kunakidzwa nezvinyowani zvemukati, asi iwe unofanirwa kurodha pasi Mod yaunoda uye wozoiwedzera kumutambo wevhidhiyo nemaoko. Asi harisi dambudziko hombe futi. Nenzira, kana iwe uchida kuitenga izvozvi, ine 40% dhisikaundi iyo isingagare kwenguva refu. Zviite izvozvi!
Iwe unogona zvakare kuiwana muHumble Store kana uchida. Uye yeuka kuti neichi chitsva chitsva chakaburitswa nevakagadziri, kugona kwacho kuchakura zvakanyanya, kuwedzera hunyanzvi hwekugadzira zvemukati nekuzvishandura paunoda iwe. Pasina kupokana, maMODs chimwe chinhu chinonakidza vatambi, saka kana iwe watove neMegaquarium uye wanga uchimirira, yako yekumirira yapera ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Megaquarium: mutambo wevhidhiyo nezve park yemvura theme
LliureX 19, "iyo nova vhezheni inowanikwa" ine Plasma graphical nharaunda